सात हजार मेगावाट बिजुलीका लागि लगानी जुटाउँदै एक कम्पनी : सात हजार मेगावाट बिजुलीका लागि लगानी जुटाउँदै एक कम्पनी :
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार ११:२० । काठमाडाैं
कम्पनीले हालसम्म ५१५.४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न १३ वटा आयोजनामा १० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै स्वपूँजीतर्फ ७८७.३ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजनामा आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ र पाँच वटा सरकारी कम्पनीमा एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ गरी रु नौ अर्ब चार करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनालाई स्वपूँजी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको सो कम्पनीले हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको छ । थप लगानीका लागि कम्पनीले वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तै कम्पनीले गत आवसम्ममा शेयरधनीलाई झण्डै रु पाँच अर्ब लाभांश र आयकर भुक्तानी गरिसकेको छ । यस्तै करपछिको खुद नाफा मात्रै पाँच अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ ।
उक्त कम्पनी स्थापना गर्दा शुरुमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले संस्थापक शेयरधनीका रुपमा लगानी गरेका थिए । उनीहरुको रु आठ अर्ब संस्थागत शेयरधनीका रुपमा लगानी थियो । दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर बिक्री गरी कूल पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बनाइएको थियो । यस्तै एक बराबर एकको दरको हकप्रद शेयर बिक्री गरी कम्पनीको कूल पूँजी ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको बिहीबारको विवरणअनुसार कम्पनीको बजार पूँजीकरण २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कम्पनीले स्थापना गरेको हैसियत नै आफैँमा महत्वपूर्ण छ । सरकारले वि.सं. २०६८ मा नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि यसको विकास सोचेअनुसार हुन नसकेको, लगानी परिचालनको भरपर्दो माध्यम नभएको ठहर गर्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले कम्पनीको स्थापना गरेको थियो । उक्त लक्ष्यमा आफूहरु सफल भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलको भनाइ छ ।
चीनका राष्ट्रपतिले गतवर्ष गरिएको नेपालको राजकीय भ्रमणको क्रममा नै कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि पावर चाइनासँग सम्झौता भएको छ । लगानी बोर्डको समन्वयमा अगाडि बढाइएको सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा लिइन्छ । जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि २०७६ माघ ५ गते सहमति भएको थियो ।
सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको तमोरलाई कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने र सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी भएको छ । सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब छ । ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा रहेकाले आकर्षक आयोजनाका रुपमा लिइन्छ ।
आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करिब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था भए पनि तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
ती दुवै आयोजनामा विप्रेषणका अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलगायतबाट जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको छ । ती आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम भइरहेको छ । लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएकोे छ । ती आयोजनाको लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।
सरकारी लगानी कम्पनी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर ब्याज मात्रै कमाएको छ भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भन्नुभया, “यो सोह्रै आना गलत र नकारात्मक सोच भएकाले लगाइएको र प्रचार गरिएको कुरा मात्रै हो ।” आफूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्य शुरु गरेको तिन वर्ष पूरा भएको जानकारी दिँदै उहाँले शुरुमा १० अर्व रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमध्ये झण्डै रु पाँच अर्ब मात्रै लगानी थियो । त्यसमा पनि २५ करोड रुपैयाँमात्रै परिचालित थियो । हाल त्यसको आकार लगानीतर्फ २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने ५५ अर्ब रुपैयाँ परिचालित भइसकेको छ ।
उहाँले आफू देश, जनता र कार्यरत संस्थाको हितलाई सधैँ केन्द्रमा राखेर काम गर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गरेको जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भागवत गीताको निस्काम कर्म भन्ने मर्मबाट प्रेरित भएको र काम गर्दै जाँदा, त्यसको फल अवश्य मिल्ने बताए ।